जीवनकाे आधार, सन्तुलित आहार : डाइटिसिएन सिंह - Disanirdesh
जीवनकाे आधार, सन्तुलित आहार : डाइटिसिएन सिंह
दिशा निर्देश ३ असार २०७९, शुक्रबार १६:३३ मा प्रकाशित (१ हफ्ता अघि)
वीरगञ्ज – जीवनमा सफलता र समृद्धि चाहने व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुनै पर्ने मधेश प्रदेश कै पहिलो डाइटिसियन नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. निशा सिंह बताउछिन । स्वास्थ्य भन्नाले सामान्य बुझाइमा निरोगी हुनुलाई लिइन्छ । तर स्वास्थ्यको व्यापक अर्थ छ । सन्तुलित आहार यस्तो आहार हो जसमा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न पौष्टिक तत्वहरू समावेश भएको हुन्छ ।
पोषक पदार्थ भन्नाले एक पूर्ण खाद्य पदार्थ हो जसमा कार्बाेहाइड्रेट, प्रोटीन, फ्याट (बोसो), चिल्लो पदार्थ, पानी, भिटामिन र खनिज पदार्थहरू समाबेश हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो क्षमता अनुसार राम्रो खाना खान्छन, तर पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू मध्ये केही चाँडै बिरामी हुन्छन । यसको कारण भनेको खाने खाना सन्तुलित आहार नहुनु हो ।
स्वस्थ आहारको बारेमा बताई दिनुस न ?
यस्ता खानेकुराहरुलाईति प्राकृतिक रुपमा खान सकिन्छ, त्यति नैलाभकारी मानिन्छ । नुन, चिनी र चिल्लो हालेर पकाइएको साजसब्जी वा फलफुल फाइदाकारक नहुन सक्छ ।
प्राकृतिक खानेकुराहरुलाई सकेसम्म ताजा अवस्थामै अवस्थामा खानु राम्रो हुन्छ ।
सवै मानिसलाई स्वास्थ्य बस्नका लागि कमसेकम दिनमा ३ पटक खानेकुरा खानुपर्छ । हामीले खाना खादा विहानको खाना अलि हेल्दि खानुपर्छ र दिउसो १ देखि ३ बजेको विचमा नास्ता खानुपर्छ । रातिको खानाहल्का खानुपर्छ ।स्वस्थ आहारका ६ वटा प्रमुख पक्षहरु हुन्छन् ।
स्वस्थ आहारको बारेमा बुझ्न सबभन्दा पहिला अस्वस्थ आहारको बारैमा बुभ्नु जरुरी हुन्छ । खानामा अस्वस्थ आहार नहुनु नै स्वस्थ आहारको पहिलो आवश्यकता बुझ्न सकिन्छ ।
जस्तै कम गुलियो, कम नुनिलो र कम चिल्लो खानालाई स्वस्थ आहार भन्न मिल्छ । साथै साग सब्जी, फलफुल र रेसादार खानाको प्रशस्त प्रयोग स्वस्थ आहारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
कार्बोहाइड्रेट, पलर्सस, मिनिरल्स, फ्याट एण्ड वाइल सुगर एण्ड ज्याकिफ्रुट, फुड एण्ड भेजिटेवल सवै थोक हाम्रो खानामा सामिल हुनुपर्छ ।
हामीहरुको बानी के छ भने दाल, भात मात्रै खाइ दिए भैहाल्छ नी जस्ता कुराहरु हुन्छन । जस्तै हाम्रो शरीरमा प्रोटिनको मात्रा पनि बढी मात्रामा चाहिन्छ ।
अहिले आएर हाम्रो समाजमा खानपानमा जगरुक भएका छन । कतिपय मानिसहरु सल्लाह सुझाव लिन आउनु हुन्छ । बच्चाहरुको लागि १ हजार देखि १२ सयसम्म क्यालोरी भएका खानेकुराहरु खुवाउनु पर्छ ।
दैनिक सन्तुलित आहार खाने गर्नुपर्छ । विशेष गरेर मधुमेह रोगीहरुलाई खान दिनुपर्दछ । पहिलेको तुलनामा अहिले मानिसमा धेरै नै बुझ्ने र समझदार भै सकेको छन ।
हामीले दैनिक दिनचर्यामा खानपानमा ध्यान नदिएका कारणले धेरै जसो मानिसलाई मधुमेह रोग लागि सकेको छ । मधुमेह यस्तो रोग हो की मानिसको शरीर भित्र ३/४ थरीका रोगहरु निम्त्याइदिन्छ ।
यस्तो हुनुमा विशेष त खानपानको गढ्बडीको कारणले गर्दा नै हो । मानिसमा खानपान र भागदौडको कारणले गर्दा मानिसमा खाने बस्नेको कुनै समय नभएको कारणले गर्दा विभिन्न रोगहरु लागि रहेको छन ।
पहिलेका हाम्रा पुर्खाहरु धेरै उमेर सम्म बाच्ने गरेका थिए । अहिले हाम्रा पालामा ५०/६० वर्षामा नै मान्छेहरु मर्ने गरेको पाइन्छ । यी सब हुनुमा विशेष गरेर खानपानको गडबडीको कारणले नै हुने गर्छ ।
जस्तै जिम गर्दा गर्दै मानिसहरु प्राय हार्टअट्याक भएर मर्ने गरेको छन ।
यो कसरी हुन्छ भन्दा जिम गर्ने मानिसहरु बढी मात्रामा प्रोटिन युक्क्त खानेकुरा मात्रै खान्छन र अरु सवैलाई बन्द गरी दिन्छन । यसकारणले हाम्रो शरीरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असरहरु परि रहेको हुन्छन ।
त्यस कारण सानै उमेर देखिनै विशेष गरेर खानपानमा ध्यान दिनु पर्छ ।
विशेष गरेर पुरुष भन्दा महिलाहरु आउने गरेका छन । बढी मात्रामा मधुमेह रोगी ३० वर्ष देखि ६० वर्ष उमेर समुहका बढी मात्रामा आउने गरेका छन ।
विगत १० वर्ष देखि थाइराइड रोग धेरै मात्रामा भएको छ । १० महिलाको जाँच गर्दा र ७ जनामा थाइराइड रोग भएको पाइएको छ ।
अचेल मानिसहरु समझ्दार भएर केहि रोग नहुदा पनि आफु तन्दुरुस्त (फिटनेस) रहनका लागी पनि सल्लाह लिन आउनुहुन्छ । जस्तै दुब्लो मानिसहरु म कसरी मोटाउन सक्छु र मोटोमानिसहरु म कसरी दुब्लाउन सक्छु भनेर बढी मात्रामा आउने गरेको छन ।
आफ्ना बच्चाको लागि उचाइ योजना र दिमाग वृद्धिको विषयमा पनि बढी मात्रामा चासो राखेर सोध्ने गरेका छन । बढी मात्रामा गाउँतिरको मानिसहरु आउने गर्छन ।
शिक्षित मान्छे भन्दा पनि गाउँतिर बाट आएका मानिसहरु हाम्रो सल्लाह सुझालाई एकदमै राम्रो सँग प्रयोग गरीदिनु हुन्छ एकदमै खुसि लाग्छ ।
तपाईले सेवा दिइरहदाको अवसर र चुनौति कस्ता कस्ता किसीमाका आउने गरेका छन ?
छिमेकी देश भारतको रक्सौलबाट एउटा महिला आउनु भएको थियो । उहाँको वजन ९४ के.जी को थियो उचाइ ५.२ इन्च मात्र थियो उहाँको उचाई अनुसार उहाँको वजन ५० देखि ६० के.जी मात्र हुनुपथ्यो ।
उहाँलाई मैले वजन कम गर्नका लागि डाइट चार्ट अनुसार बताए र उहाँले मैले भनेका कुराहरु मानिदिनु भयो । सुरुमै तपाइ आत्तिएर हुँदैन । १ महिना मै तपाइको वजन घट्दैन मैले भनेको अनुसार गर्दै जानु होला ।
तपाइको वजन घट्छ भनेर विश्वास दिलाएको थिए त्यो साच्चै नै ६ महिना भित्र उहाँको वजन कम भयो र उहाँ पनि एकदमै खुसी र म पनि एकदमै खुसी र विर्सन नसक्ने क्षण भएको छ ।
चुनाैति पनि निकै छ डाइट चार्ट अनुसार गरीदिनु भयो भने सहज हुन्छ । यदि त्यस्तो नगर्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ ।
अवश्य नै मोटोपन घटाउने समस्या बढी चुनाैति हुन्छ ।
उमेर उचाइको हिसाबले कति कति वजन हुनुपर्छ ?
हाम्रो देश नेपालमा मानिसको उचाइ भनेको ५ देखि ६ फिटसम्म हुने गर्छ । ५.२ उचाइ अनुसार ५०के.जी देखि ६० के.जी सम्म राम्रो मानिन्छ ।
६ फिटको मानिसलाइ ६८ देखि ७० के.जी सम्म राम्रो ठिक हुन्छ । यदि यो भन्दा माथि वजन बढेको छ भने त्यसलाइ मोटोपन बढी भएको भनिन्छ । यदि कुनै बच्चा ४ फिटको ४० के.जी वजन छ भने त्यस्ता बच्चालाइ पनि वजन बढी भएको भनिन्छ ।
बच्चाहरुको वजन बढ्नुमा अभिभावककै भुमिका बढी हुन्छ । घरको खाना भन्दा बढी बाहिरको खानेकुराहरु बढी मात्रामा खान दिने गर्छौ । मैदाको परिकार बढी मात्रामा खादा पनि वजन बढ्छ ।
जस्तै म.म, चाउमिन, बरगर, पिज्जा, चकलेट, कोल्ड ड्रिन्क्स जस्ता बाहिरी खानेकुराले हामी सबैलाई असर पुर्या‍इरहेको हुन्छ । खानालाई समय तालिका अनुसार खाने र व्यायाम गर्दा अति नै राम्रो हुन्छ ।
आम नागरिकको लागि सल्लाह सुझाव के दिन चाहानु हुन्छ ?
हाम्रो समाजको लागि अहिले मोटोपन एकदमै बढी छ । मोटोपनले धेरै किसिमको रोगहरु निम्त्याउने गर्छ ।
मोटोपनले मधुमेह, ब्लड प्रेसर, हृदयघात जस्ता विभिन्न किसिमका रोगहरु लाग्ने गर्छ । अहिले ३० वर्ष भन्दा माथिका उमेर समुहका मानिसलाइ घुडा दुख्ने समस्या छ ।
यस्ता समस्यम आउनु भनेको माेटोपन नै हो । किनकी हाम्रो शरीरको सबै वजन घुडामानै निर्भर हुन्छ । त्यस कारणले मोटोपन बढाउनु हाम्रो लागि जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
खाने समय र सुल्ने समय र व्यायाम जस्ता अति आवश्यक कुराहरु हामीले आफ्नो दिनचर्यामा समय तालिका अनुसार गर्न सक्यो भने मोटोपन कम गर्न र रोगहरु लाग्न बाट बच्च सकिन्छ ।
हामीले खाना खादा बिहानको खाना भनेको राजाले खाने जस्तो खाना खानुपर्छ । दिनभरीको भागदौड र क्यालोरीको मात्रा एकदमै बढी चाहिने हुदा आरामले बसेर एकदमै चपाएर सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ ।
रातिको खाना भनेको एउटा जोगीले खाने जस्तै थेरै मात्रामा खानुपर्छ । जो व्यक्ति कम सुत्छ उ पनि बढी मोटाउने गर्छ ।
सुत्नको लागि पनि ६ देखि ८ घण्टा सुत्नु दैनिक आवश्यक छ । यदि यी सबै कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा अपनाउन सक्याैँ भने मोटोपन रोगबाट बच्च सकिन्छ ।
साभार : मध्य नेपाल
बढ्यो रगतको मूल्य, प्रतियुनिट १ हजार ६४० रुपैयाँसम्‍म
वीरगञ्जकाे छपकैयामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
जगर्नाथपुर मेलामा नक्कली नोट साट्दै गरेका २ जना युवा पक्राउ
विभिन्न लायन्स क्लबको संयुक्त आयोजनामा वीरगञ्ज ३१ मा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ पर्सा इन्चार्जमा हरिन्द्र यादव